Imibhikisho isiphoqe uMengameli ukuba ahoxise ukulungiswa kwentela eColombia - Bayede News
UMengameli waseColombia u-Ivan Duque uthe uzokuhoxisa ukulungiswa kwentela okuhlongozwayo ngemuva kwemibhikisho enodlame kanye nokuphikiswa okuvela kubashayimthetho okusabalele, yize egcizelela ukuthi kusadingeka kwenziwe uguquko ukuqinisekisa uzinzo kwezezimali.
UDuque uthe ngoLwesihlanu kuzobuyekezwa lo mthetho ukuze kususwe amanye amaphuzu aphikisanayo – okubandakanya ukukhushulwa kwentela yokuthengisa kuzinsizakusebenza nokunye ukudla – kodwa phambilini uHulumeni wawugcizelele ukuthi ngeke ihoxiswe.
Imibhikisho emelene nalolu guquko isiholele ekufeni kwabantu abaningi ezweni lonke selokhu kuqale ngoLwesithathu.
“Ngicela iCongress ihoxise umthetho ophakanyiswe uMnyango Wezezimali futhi ngenze ngokushesha umthetho omusha oyisithelo sokuvumelana, ukuze kugwenywe ukungaqiniseki kwezezimali,” kusho uDuque kuvidiyo.
Izinguquko, uHulumeni ozamile ukuthi zibalulekile ekuzinziseni ezezimali zaseColombia, ukugcina isilinganiso sazo sezikweletu nokuxhasa izinhlelo zenhlalo, kusadingeka, kusho uDuque.
Amaqembu ezepolitiki, abaphathi bendawo, abaholi bamabhizinisi kanye nezinhlangano zomphakathi banikele ngemibono ebalulekile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kusho yena. Kukhona ukuvumelana ngesidingo sentela yesikhashana emabhizinisini nakuzabelo, ukwenyuka kwentela engenayo yezinyathelo ezicebile nezishubile zombuso, kusho uDuque. “Kuyisikhathi sethu sonke ukuthi sisebenzisane ngaphandle kobubi,” esho.
NgoLwesihlanu ibhange elikhulu lixwayise ngokuthi ukwehluleka ukwamukela uguquko kungaba nomthelela omubi emnothweni, kanti ukulahleka kwesilinganiso sezinga lokutshalwa kwemali kuleli sekuvele kunenani labatshalimali abaningi. Abomthetho, izinyunyana namanye amaqembu basincomile lesi simemezelo njengokunqoba. Imicimbi yokugubha, umbhikisho wendabuko lapho abantu bebeshaya amabhodwe namapani bekubonakala kwezinye izindawo. “Yintsha, izinhlangano zomphakathi kanye nezakhamuzi ezihlangene ezibonile ukufa nokuhlula uHulumeni,” kusho iSenator u-Ivan Cepeda kuTwitter.
“Sengathi uHulumeni ungangethula izinguquko ezifanayo. Izakhamuzi ngeke ziwamukele amaqhinga. “Okwamanje asikabi khona isibalo esiqondile sokufa kwabantu abaxhumene nemibhikisho, phakathi kwezehlakalo zokuphanga, ukucekelwa phansi kwesithuthi somphakathi kanye nokuvinjelwa kwemigwaqo emadolobheni amaningi. Iziphathimandla zendawo eCali, okuyidolobha lesithathu ngobukhulu bezwe nalapho imibhikisho ibe nodlame kakhulu, ziqinisekise ezintathu. Kuphinde kwafa omunye eNeiva, kwabulawa iphoyisa eSoacha. Izinhlangano ezilwela amalungelo abantu zinezinsolo zokuhlukunyezwa ngamaphoyisa – ikakhulukazi eCali – kanti zithi kushone abantu abangaphezu kwama-20.
UDuque uthe maduzane amadolobha asengozini enkulu yokuphazamiseka azothola usizo lwezempi, okuyisicelo esinqatshwe yiMeya yaseBotota uClaudia Lopez.